မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများဆွေးနွေး - People Media Myanmar
Home မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများဆွေးနွေး
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများဆွေးနွေး
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Piyush Goyal တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အထည်အလိပ်၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပိုမိုတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါ ကြောင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းများကြုံတွေ့လျက်ရှိရာ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအကြား ယခုကဲ့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် အခက်အခဲများကို အတူလက်တွဲ၍ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်းစသည်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Piyush Goyal က ပြောကြားရာတွင် နှစ်နိုင်ငံပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု တိုး တက်စေရေးအတွက် MYANTRADE နှင့် India Trade Promotion Organization (ITPO)တို့အကြား နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လမ်း/တံတား စီမံကိန်း များကို ဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသစွာဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီအထောက်အပံ့များကို ဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်သာမက အခြားကဏ္ဍများ တွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းအားဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုများ တိုးတက်လာ မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
#PeopleMedia #ဦးသန်းမြင့် #မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသံရုံး
မွနျမာ-အိန်ဒိယ နှဈနိုငျငံ ပငျလယျရကွေောငျးနှငျ့ နယျစပျကုနျသှယျရေး အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျနိုငျရနျ နှဈနိုငျငံ အစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးမြားဆှေးနှေး
မွနျမာ-အိန်ဒိယ နှဈနိုငျငံပငျလယျရကွေောငျးနှငျ့ နယျစပျကုနျသှယျရေး အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျနိုငျရနျ နှဈနိုငျငံ အစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးမြားဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
မွနျမာ-အိန်ဒိယ နှဈနိုငျငံ ကုနျသှယျရေးပူးတှဲကျောမတီအစညျးအဝေး၌ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့ နှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာန၊ ဝနျကွီး H.E. Mr. Piyush Goyal တို့ ဆှေးနှေးခဲ့ သညျ။
မွနျမာ-အိန်ဒိယ နှဈနိုငျငံ ကုနျသှယျရေးပူးတှဲကျောမတီအစညျးအဝေးကငျြးပခွငျးအားဖွငျ့ မိမိတို့နှဈနိုငျငံအကွား ကုနျသှယျမှု၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု၊ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေး၊ အထညျအလိပျ၊ ပို့ဆောငျဆကျသှယျရေး၊ ဘဏျလုပျငနျးကဏ်ဍ မြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားသညျ အရှိနျအဟုနျဖွငျ့ပိုမိုတိုးတကျလာလိမျ့မညျဟု မိမိအနဖွေငျ့ ယုံကွညျပါ ကွောငျး၊ လကျရှိဖွဈပျေါနသေော Covid-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးလုံးတှငျ စီးပှားရေး အကွပျအတညျးမြားကွုံတှလေ့ကျြရှိရာ မိမိတို့နှဈနိုငျငံအကွား ယခုကဲ့သို့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားမှတဈဆငျ့ အခကျအခဲမြားကို အတူလကျတှဲ၍ ရငျဆိုငျကြျောလှားသှားနိုငျမညျဟု ယုံကွညျပါကွောငျးစသညျဖွငျ့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့က ပွောဆိုခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ အိန်ဒိယနိုငျငံ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာန၊ ဝနျကွီး H.E. Mr. Piyush Goyal က ပွောကွားရာတှငျ နှဈနိုငျငံပငျလယျရကွေောငျးနှငျ့ နယျစပျကုနျသှယျရေး အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျရနျအတှကျ ဆကျလကျပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ ထို့အပွငျ မွနျမာနှငျ့အိန်ဒိယ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျမှု တိုး တကျစရေေးအတှကျ MYANTRADE နှငျ့ India Trade Promotion Organization (ITPO)တို့အကွား နီးကပျစှာပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကဏ်ဍပေါငျးစုံ၌ ရငျးနှီးမွှုပျနှံလကျြရှိပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ အခွခေံအဆောကျအဦ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ လမျး/တံတား စီမံကိနျး မြားကို ဆကျလကျကူညီဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျပွီး ရရှေညျ တညျတံ့ခိုငျမွဲရေးအတှကျ အိမျနီးခငျြးကောငျးပီသစှာဖွငျ့ နညျးပညာဆိုငျရာ အကူအညီအထောကျအပံ့မြားကို ဆကျလကျပေးအပျသှားမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ ကုနျသှယျမှု၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားတှငျသာမက အခွားကဏ်ဍမြား တှငျလညျး ဆကျလကျပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားခွငျးအားဖွငျ့ နှဈနိုငျငံအကွား ကုနျသှယျမှုမြား တိုးတကျလာ မညျဖွဈကွောငျး ပွောဆိုခဲ့သညျ။
#PeopleMedia #ဦးသနျးမွငျ့ #မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာအိန်ဒိယသံရုံး
« ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများအတွက် ကာကွယ်ဆေးမရဘဲချန်ထားရမည်မဟုတ်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပြော
ရုရှားနိုင်ငံထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက လူတစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၂၀ အောက်သာ ကျသင့်မည် »